Manentana ny mpomba azy ao amin’ny antokony hiroso amin’ny fifandonana ny filoha Alpha Condé · Global Voices teny Malagasy
Mampidi-doza ho an'ny fandriampahalemana any Guinée ireo filazana ireo
Voadika ny 26 Avrily 2019 5:26 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Swahili, Italiano, Español, Ελληνικά, Français
Alpha Condé tamin'ny taona 2012 tany amin'ny Zaikaben'ny Toekarena Manerantany . CC BY-SA 2.0
Raha toa tsy manome alalana afa-tsy fe-potoana roa mifanesy ho an'ny filoham-pirenena ihany ny lalampanorenana Gineana dia vao avy nanambara i Alpha Condé, filoham-pirenena am-perinasa fa mikasa ny hitondra amin'ny fe-potoana fahatelony indray izy, izay manitsakitsaka ny lalàna ao amin'ny firenena. Ankoatra izany, tsy nisalasala ny nanao antso hisian'ny herisetra izy hanatanterahana ny fikasany. Nitatitra ny fanambaran'ny filoha nandritra ny kabary vao haingana tamin'ny 24 Martsa 2019 i Sonny Camara, mpanao gazety monina ao Conakry tao amin'ny fanadihadiana nivoaka tao amin'ny Horizon Guinea:
… Tonga aho mba hilaza aminareo fa apetrako ny palitaoko amin'ny maha-filoha ahy. Ary alaiko ny palitaoko amin'ny maha-mpitolona ahy, satria vonona hiady amin'ireo olona ireo aho izao … “,” … Miomàna hiatrika fifandonana … “,” … Tsy ny filoha no mivoaka ankehitriny fa ny mpitolona… “,” … Tsy misy olona eto Guinée afaka hanakana ahy tsy handeha eo anoloan'ny vahoaka mba hanontany azy ireo izay ilainy… “” … Raha toa ka manitsaka ny tongotrareo izy ireo, miomàna ihany koa hanitsaka ny tongotr'izy ireo mba ho fantatr'izy ireo fa tsy matahotra na inona na inona ianareo … “
Nanomboka nanambara ny faniriany hirotsaka amin'ny fe-potoana fahatelo i Alpha Condé volana vitsivitsy taorian'ny nahalany azy indray tamin'ny volana Mey 2015. Vao nanomboka ny taona 2016 dia efa nanambara ny fivilian-dalan'ny filoham-pirenena ao amin'ny Nouvelle de Guinée i Ibrahima Diallo, Tale Jeneralin'ny onjam-peo “Liberté FM” any Conakry:
Saingy ny fandrenesana an'i Alpha Conde miteny amin'ny vahoaka nasionaly sy iraisampirenena fa ny “vahoaka masi-mandidy” ao Guinée no hanapa-kevitra na tsia ny amin'ny fe-potoana fahatelo hiasany dia midika fa “ratsy kokoa” noho ny olona teo alohany izay niady taminy nandritra ny fiainany amin'ny maha mpanohitra azy tsy misy fiafarany ilay olona sady te-ho Itompokolahy Mandela no Obama ho an'ny fireneny. Ankehitriny, te-hanao ny vahoaka be herimpo ao Guinée ny maha-mendrika azy handrombaka ny mety ho “fe-potoana fahatelo” taorian'ny ireo roa (2) nifanesy izy rehefa miteny i Koro hoe” ny vahoaka no hanapa-kevitra.”
Tsy niova hevitra tamin'ny fikasany i Condé tamin'ny alalan'ny fandraisana fepetra mba tsy hitrangan'ny izay rehetra tsy ampoizina, anisan'izany ny fanesorana ny Filohan'ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana Me Kéléfa Sall, izay natao tsy nanaraka ny dingana ara-dalàna. Nanamafy noho izany i Amadou Tham Camara, mpitati-baovao ao amin'ny Guinée News fa:
Taorian'ilay asa fanozongozonana izay natao tao amin'ny CENI dia natao toy izany ihany koa ny rafitra araka ny lalàm-panorenana faharoa miandraikitra ny fifidianana nasionaly .
Ankehitriny, misy ny lalambe misampatsampanana hahazoana ny lazaina ho maro an'isa mahazo ny hatramin'ny roatokon'ny solombavambahoaka amin'ny fifidianana parlemantera izay hatao ny telovolana voalohany amin'ny taona 2019. Io solombavambahoaka maro an'isa io no takiana mba hanombohana ny fanitsiana ny lalàm-panorenana. Izany no dingana goavana natao mba hamahana ny hidin'ny lalampanorenana izay mametra ny isan'ny fe-potoana hiasan'ny filoham-pirenena ho roa.
Ny nampitandrina an'i Alpha Condé tsy hanova ny lalàm-panorenana nandritra ny fianianana tamin'ny nanombohan'ny fe-potoana hiasany faharoa no “fahadisoana” nataon'i Me Kéléfa Sall, filohan'ny fitsarana avo momba lalàm-panorenana teo aloha. Nanambara i Kéléfa Sall hoe:
Tokony hampiray antsika amin'ny zava-dehibe ny fitantanana ny firenena. Tsy tokony hanodidina antsika ireo mahery fihetsika izay manimba ny firaisam-pirenena. Alaviro hatrany ny fibolisarana mankany amin'ny lalana voarara amin'ny demokrasia sy ny fahaiza-mitantana. Mitandrema tsy ho renoky ny feonkiran'ny mpanitsy ny lalam-panorenana satria mbola mailo hatrany ireo vahoaka ao Guinée na dia efa nomen'izy ireo sy nohavaoziny ho anao aza ny fitokisany.
Tsapa ny fihetsem-pon'ny Gineana. Nandritra ny valan-dresaka an-gazety natao ny Zoma, 29 Martsa 2019 tany Conakry, izay nokarakarain'ny mpikambana ao amin'ny Filankevitra Nasionalin'ny Tetezamita teo aloha, notarihin'ny fikambanana Ne Touche pas à ma Constitution (Aza mikasika ny lalàm-panorenako) dia nampahatsiahy i Boubacar Siddighy Diallo, iray amin'ireo mpandray fitenenana fa ahitana fizarana roa izay tsy azo saratsarahina ny lalàm-panorenana Gineana:
ka fantarina ny fizarana navondrona mety ho azo ovana araka araka ny fepetra mifanaraka amin'izany tanjona izany sy ny voalazan'ny andininy faha-154 izay heverina ho tsy azo ialàna amin'ny fanitsiana lalam-panorenana. Ity fizarana farany ity no ahitana ny hidin'ny lalàm-panorenana izay miaro azy amin'ny mety hisian'ny fanodikodinana ka mety hiantraika amin'ny fandriampahalemana sy ny fahamarinan-toeran'ny firenentsika.
Naneho hevitra ihany koa ny mpanohitra toa an'i Cellou Dalein Diallo, filohan'ny Fikambanan'ny Hery Demaokratika ao Guinée nandritra ny fivorian'ny mpanohitra Repoblikana izay nilaza hoe :
Nanamafy indray ny fahavononany hiara-hiasa amin'ny hery velona rehetra ao amin'ny firenena ny mpanohitra Repoblikana, mba hanoherana ny fihemorana demaokratika sy ny fitondrana mandrapaha-faty izay tian'i Alpha Condé horombahana…
Nampahafantatra tao amin'ny pejiny Facebook i Sekou Koundouno, mpitarika ny Hery Sosialy ao Guinée (FSG):
Nanoratra tany amin'ny Lehiben'ny Fampanoavan'ny Fitsarana Iraisam-pirenena misahana ny Heloka Bevava ihany koa ireo mpikatroka ao amin'ny fiarahamonim-pirenena mba hangataka azy “hanara-maso akaiky ny firenentsika ary hanapa-kevitra ampahibemaso mba hisorohana ny korontana eto Guinée”.
Toy izany ihany koa, naneho hevitra tao amin'ny Twitter ihany koa ny olom-pirenena Gineana:
Tena mampidi-doza ho an'ny fandriampahalemana sy ny filaminana ara-tsosialy ao Guinée ny tenin'ny Filohan'ny Repoblika. Manameloka tanteraka indray ity fahazarana tsy dia mendrika loatra ity aho manoloana ny firenentsika. Mila manao antso any amin'ny CEDEAO, ny Vondrona Afrikana, ny ONU, sns isika.
Naneho ny heviny manohitra ity fe-potoana fahatelo hitondran'ny filoha ity ny vahoaka manerana an'i Guinée. Izany no nitranga tany Coyah. Tanora miisa efatra no nosamborina noho ny torolalan'ny iray avy amin'ireo mpanohana izany fe-potoana fahatelo izany. Tsy misy fampihorohoroana hanakana ny Gineana amin'ny fikatsahan'izy ireo ny demaokrasia.
Nisafidy ny fanesoana ho toy ny fanehoan-kevitra ilay mpisera Facebook malaza, Alimou Sow, tamin'ny alàlan'ny filazana an-kolaka ny rivotra nifofofofo namely an'i Conakry renivohitra ny alin'ny 2 Aprily mifoha 3 Aprily:
Toa hita fa i Eole no andriamanitry ny rivotra (teny nihavian'ny hoe éolien) ao amin'ny angano Grika. Noho izany, nandalo tao Guinée i Eole tamin'iny alina iny tsy hitondra ny afisy fanodikodinana saimbahoaka ihany fa ireo izay nametraka izany sy ireo nampiroborobo ny #Nambara [olana] faha-3 ihany koa. Lasan'ny rivotra. Ho tsara #olana
Avy amin'ny mpanoratra sady mpahay toekarena Gineana, Ibrahima Sanoh ny fanehoan-kevitra nahaliana indrindra, izay nanomboka ny hetsiny Patriotes pour l’Alternance et le Salut (Tia tanindrazana ho amin'ny fanovana sy ny fahafahana) ny 2 Janoary mba hanoherana ny fikasan'ilay filoha ankehitriny Alpha Condé handrombaka ny fe-potoana fahatelo hiasany amin'ny taona 2020.